Ikhaya le-Rock Port elinombono
Igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle yonke sinombuki zindwendwe onguTierra
Indawo enamagumbi angaphantsi angama-800 square metres eyakhiwe kwigumbi lokulala elinegumbi elinye lokuhlambela eligcweleyo, amagumbi amabini okulala, ikhitshi, kunye negumbi lokuhlala elinefenitshala. Indawo yokuhlala inomnyango wayo owahlukileyo ukusuka kwigumbi eliphezulu lekhaya kunye neendawo zokupaka ezitratweni. Ngokuqhelekileyo akukho msebenzi omninzi oqhubekayo phezulu kule yunithi ukuze ingxolo evela phezulu ingabi ngumba. Sirenta xa kucinywa iSikhululo seNyukliya saseCooper kunye nabasebenzi basefama zomoya kwizivumelwano zexesha elide ngokunjalo.
Eli khaya limi kanye ngaphaya kweRock Port Interstate 29 Exit, lijikelezwe ngamaplanga kwelinye icala kunye nembono emangalisayo ukusuka phezulu kwelinye. Ifriji yobungakanani obupheleleyo, i-Oster Convection Oven kunye neGrill enepropane iya kubandakanywa. I-Smart TV's kwigumbi lokulala kunye negumbi lokuhlala ziya kufumaneka kwaye zilayishwe ngeHulu Live kunye neNetflix ekhoyo. Elinye igumbi linendawo yokulala enenombolo yokumkanikazi eneempawu ezimbini zolawulo kwaye elinye igumbi linendawo yokulala enenani elipheleleyo. Igumbi lokuhlala linamawele afihla ibhedi ukuze asetyenziswe nayo. Esi sithuba sikwabonisa ipatio entle yekhonkrithi ukuze uyonwabele ukubukela. Kukho izitepsi eziya kufuneka zisetyenziselwe ukungena kwindawo yokungena yangasese ukusuka kwi-driveway engentla. Impahla iyafumaneka ngokwesivumelwano nomninimzi ngaphambi kokuba ungene ngenxa yokufikelela ngaphakathi kwikhaya lethu kwinqanaba elifanayo nelendlu.
Ekunene uphume kwi-Interstate 29 Rock Port. Ukuzingela koluntu ngaphakathi kweemayile !!! SineMcDonald's, i-Subway, iDusty Trail Steakhouse, kunye nezikhululo zerhasi ezintathu ngaphakathi kwe-1/4 yemayile ukusuka kwindawo yethu. Yonke iblacktop kwaye akukho graveli. Sikwangaphakathi kwe-1/4 yeemayile ukusuka kwi-White Barn Wedding Chapel ezantsi nje esitratweni. Thina 10 imizuzu ukusuka Tarkio, Missouri (ene-Gym emangalisayo / iziko ukuzilolonga) kunye 6 imizuzu ukusuka Brownville, Nebraska apho Cooper Nuclear Station ibekwe. Kukho imathi yokuhlamba impahla kwisithuba semizuzu eli-15 ukusuka kwindlu yethu ukuba akukho malungiselelo enziweyo okusetyenziswa kwethu endlwini.
Umbuki zindwendwe ngu- Tierra
Sihlala sisekhaya okanye sijikeleze ukuba kukho imiba evelayo.